အခါညစ်ညမ်းဂိမ်းများမှကြွလာ,ဤမျှလောက်အတိတ်နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ. ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေစဉ်းစားစတင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လက်တွေ့ကျကြည့်ရှုကြောင်းအချို့သောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဂိမ်းရတဲ့င်. ဒီဖော်ပြချက်ကိုက်ညီနိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုမှာအချိုပွဲသည်သမီးဖြစ်၏,ဒါ့အပြင်ဒီဂိမ်း,သင်ကမ္ဘာ့အပူဆုံးသမီးအချို့ရှိပါတယ်သူတစ်ဦးကံကောင်းလဒေ၌ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အတွက်အသစ်တစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားအမြင်အာရုံဝတ္ထုမိသားစုဂိမ်း.
အဆိုပါဂိမ်းခဏတစ်ပတ်လည်ခဲ့ပြီကြောင့်ပေါက်နှင့်မွမ်းမံမှုများစာရေးတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာဤလူကြိုက်များစီးရီး၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရှိသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုအထူးစေသည်ကိုသင်အခမဲ့ဂိမ်း၏အွန်လိုင်းဗားရှင်းကစားနိုင်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဘာမှမဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မလိုပါ. ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုသင်၏ဘရောက်ဇာထဲသို့တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်သည်၊၎င်းအားမလိုအပ်သည့်ထပ်တိုးမှုများမရှိစေရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုပူးပေါင်းရန်သင့်အားမေးပါနဲ့သင်သည်တစုံတခုကိုပေးဆောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလှူဒါန်းဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်., ဤစာမျက်နှာတွင်ယခုလက်ရှိတွင်မည်သည့်စာသားမှမရှိပါ။ ဒါဟာဝဘ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရငျးနှီးမိသားစုညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ဤနေ့၌တဦးတည်းဖြစ်၏ထိုသို့ကြီးမားသောပြန်ကန်တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်. ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤဂိမ်းကိုချစ်ကြလိမ့်မည်ဟုသိအောက်ပါအပိုဒ်အတွက်,သင်ပြုပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ကျနော်တို့ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်. ငါတို့ဥစ်စာ၏ဤဆိုက်ကိုသင်အချိုပွဲသည်သမီးကစားနိုင်သည့်နေရာအကောင်းဆုံးနေရာသည်အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်လည်းပြောပြလိမ့်မယ်.
အဆိုပါဂိမ်းတော်တော်ရိုးဖြစ်ပါသည်. ရှေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း,ဒါကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာ၏ညစ်ညမ်းယုတ္တိဗေဒအောက်ပါအတိုင်း. ကလေးငယ်အဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြိုက်ဆုံးအမျိုးသမီးငယ်အချို့ရှိသည့်ဖခင်၏ရှုထောင့်မှသင်ပါဝင်မည်။ အတူတူသူတို့နှင့်အတူ,သူကသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြေး. ဒါကအသေးအမွှားလေးပါ၊လုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါ။ သင်သည်မိမိ၏သမီးများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏မိတ်သဟာယပြုခြင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်သည့်နည်းလမ်းများရှိကြသည်။
သင်နှင့်အတူကစားရန်လေးဆင့်ရပါလိမ့်မယ်. အသီးအသီးပြဇာတ်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြည့်နှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပါတယ်. ဇာတ်ကောင်ဒါကောင်းစွာသင်သည်သူတို့အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးငယ်နေစဉ်းစားစတင်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်များမှာ. သူတို့ဟာလက်တွေ့ကျတယ်ဆိုတာကိုသာမကလူသားတွေလုပ်သလိုလည်းလုပ်ဆောင်ကြတယ်။ အကြောင်းကကစားပွဲကိုဖန်တီးသူတွေဟာသူတို့ရဲ့စကားပြောလိုင်းတွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျရေးရမယ်ဆိုတာသိပြီးသူတို့ရဲ့အပြုအမူထဲကနည်းလမ်းတွေကိုတွေ့ပြီးစာဝှက်ထားတဲ့စရိုက်တွေကိုထင်ဟပ်လို့ပါ။
သင်နှင့်အတူဆော့ကစားလိမ့်မည်ဟုသမီးတစ်ဦးပြစ်မှားလိင်စိတ်ရှိပြီးသူမကိုသည်ခပ်သိမ်းသောအပြောင်းအရွေ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုမာရ်နတ်မှချစ်သောသူသောသူခါးပန်းမိန်းကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ေနာက္ထပ္သမီးေလးတစ္ေယာက္ကေတာ့စမတ္က်တဲ့ပံုစံပါ။မ်က္မွန္နဲ့ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ဗီဒီယုိခရင္မ္တစ္မ်ိဳးပါ။ ကလေးဘဝတုန်းကဘောလုံးအမေလိုပြုမူခဲ့တဲ့တုန်တုန်ရီရီသမီးလည်းရှိတယ်။ နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့မိသားစုရဲ့ပုန်ကန်မှုရှိတယ်ဆံပင်နက်နက်နဲ့ပန့်ခ်မိန်းကလေး၊ဘစ်ဆာကာနဲ့ရှပ်အင်္ကျီတွေပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးလေးယောက်မှာတူတာကသူတို့အဖေကိုချစ်တာပါ။ တဖန်သင်တို့မက်စ်ကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမွေ့လျော်ရလိမ့်မည်.
အိပ်ရာဝင်နောက်ကျခြင်း၊အိပ်ရာထနောက်ကျခြင်း၊အိပ်ရာထနောက်ကျခြင်း၊အိပ်ရာထနောက်ကျခြင်း၊အိပ်ရာထနောက်ကျခြင်း၊ အဆိုပါဂိမ်း၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှိပါတယ်. သင်ညစာစီမံခန့်ခွဲရန်ရှိသည်သောဘေးထွက်ရှိသည်နှင့်သင်မိန်းကလေးများ၏မှရသောဘေးထွက်. အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲဘက်ခြမ်းသူ့ဟာသူအပေါ်တော်တော်ပျော်စရာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းဖြစ်ရပြီမဟုတ်လျှင်ကညစာသူဌေးကြီးအဖြစ်ကစားရန်ပျော်စရာဖြစ်ရပြီမယ်လို့.
ဒါပေမဲ့ကစားပွဲရဲ့ဘေးမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ညစာဟာမိန်းကလေးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျစေဖို့ဆင်ခြေတစ်ခုပါ။ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကသိပ်ကောင်းပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤသူငယ်နှင့်အတူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်နှင့်သင်အဖြေအတွက်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုများရလိမ့်မည်။ သို့သော်,အဖြေများကိုကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်မည်မဟုတ်. ဒါပေမဲ့သူတို့ကသင့်စိတ်ကိုညစ်ညမ်းစေမယ့်ဆိုးသွမ်းတဲ့လုပ်ရပ်တချို့ကိုလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ အချိုပွဲသည်သမီးအတွက်လိင်ဂိမ်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်.
အလုပ်ရှင်၊အလုပ်ရှင်၊အလုပ်ရှင်၊အလုပ်ရှင်၊အလုပ်ရှင်၊အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမား၊ ဒါဟာသင်ဂိမ်း၏ဇာတ်ကောင်တွေဟာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလက်ရာနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟုလိင်ဂိမ်း၌တည်ရှိ၏. သင်၏သမီးအသီးအသီးအိပ်ရာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်သူတို့သည်သင့်ကိုစို့နှင့်လျက်ရသောကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းတော်တော်စွဲငြိဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်,ဂိမ်းသင့်ရဲ့မျက်နှာစာ၏ရုပ်ပြောင်ထံမှပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူ. သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်ဒီဂိမ်းထဲမှာလိင်နှင့်ပတ်သက်.အရာအားလုံးခစျြလိမျ့မညျ။
ကျနော်တို့အခမဲ့အဘို့ဤဂိမ်းကိုဆက်ကပ်သည်ဟုပြောသောအခါ,ကျနော်တို့ကယ့်ကိုဆိုလို. ကျနော်တို့ဘာမှမဆပ်ဖို့သင်မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတပါး,ငါတို့သည်လည်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဘို့သင့်ကိုမမေးကြဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မည်သည့်နည်းနှင့်မျှဝင်ရောက်ရန်မလိုပါ၊ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာမလိုအပ်ပါ၊ကျွန်ုပ်တို့ဆိုက်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်သင့်အိုင်ပီကိုအဆုံးမှအဆုံးစာဝှက်ထားသောဆာဗာများမှကာကွယ်ထားသည်မှာသေချာပါသည်။
ဒီဆိုက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုငွေရှာကြသလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဤစီမံကိန်းသည်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ဝက်ဆိုက်မှာမီးတွေဆက်ထွန်းထားဖို့နဖူးစည်းစာတမ်းလေးတွေတင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမအခန်းကနေနောက်ဆုံးအထိသင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အခြားအရာတွေတော့မပါပါဘူး။ ထိုတပ်မက်ခြင်း၏ဤရှည်လျားသောခရီးအတွက်အများအပြားအခန်းကြီးနှင့်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှလူများစွာမှဂိမ်းပူဇော်ရန်ဤစီမံကိန်းစတင်ခဲ့သည့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအရာရှိလိမ့်မည်.
ဒါဟာသင်အခမဲ့အဘို့ဤဂိမ်းကစားနိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်မဟုတ်ပါဘူး. ဒါပေမဲ့အခြားဘယ်သူများမှကျွန်မတို့လုပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်မှုကိုအဲဒီလိုအဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုပေးမနေပါဘူး။ သငျသညျအန်းဒရွိုက်နှင့်အိုင်ကွန်အပေါ်ဒီဂိမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ်,အဖြစ်ပြတင်းပေါက်များနှင့်မက်. သင်ကအန်းဒရွိုက်အပေါ်ဂိမ်းခံစားဖို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်,သင်ရဲ့အပေါ်ကဲ့သို့တူညီသောအရေးယူခံစားပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ဟာကုဒ်ကိုပတ်ချာလည်လျက်တစ်ခုခုချို့ယွင်းချက်တွေ၊အသံတွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုပြင်ဖို့ပတ်ချာလည်လျက်ရှိနေပါပြီ။ သင်ဂီတကိုကြားချင်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့နားကြပ်ကိုအသုံးပြု.အကြံပြုပါသည်,ထိုညည်းတွားခြင်း,ပိုကောင်းတဲ့အမာခံလိင်၏အသံများကို., မိသားစုလိင်ဂိမ်းတွေကိုနှစ်သက်ကြတဲ့အခြားကစားသမားတွေနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့မှတ်ချက်အပိုင်းတောင်ရှိပါသေးတယ်။